Tababar Ku Saabsan Barashada Aaladaha Casriga ah ICT. - Cakaara News
Tababar Ku Saabsan Barashada Aaladaha Casriga ah ICT.
Jigjiga (cakaaranews) talaado, 31, May , 2016 Tababar ay fulintiisa iska kaashadeen xafiska adeega shacabka iyo horumarinta cudada shaqaalaha DDSI iyo shirkada isgaadhsiinta itoobiya ayaa ka qabsoomay xarunta deegaanka ee jigjiga.
Tababarkan oo looqabtay 22 iskaashato oo ka kala socday gobolada Afdheer, Shabeele,Faafan, Qoraxay iyo Jarar ayaa waxay dulucda ujeedadiisu ahayd in xubnahan ka socday iskaashadooyinkaasi fahan buuxa laga siiyo nidaamka adeegsiga aaladaha casriga ah ICT.
Waxaana furitaankii tababarkan ka hadlay maareeyaha shirkada isgaadhsiinta ee laanta deegaanka harar mudane Adnew Gabre kaasi oo ka warbixiyay ahmiyada tababarkan wuxuuna sheegay in mudada uu socto tababarkani lagu qaadan doono casharo kor loogu qaadayo aqoonta xubnahan iskaashatooyinka gaar ahaan barashada aaladaha casriga ah ee ICT.
Waxaa kale ka hadlay furitaankii tababarka agaasinka waaxda ICT ee xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqalah DDSI Mundane Cabdikhadar Caaqil Colaad oo sheegay muhiimada uu leeyahay tababarkani wuxuuna ku booriyay xubnahan qaadanaya tababarka in ay mudda uu socdo ka faa’iidaystaan is ay uga faa’iideeyaan iskaashatooyinka ay ka socdaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in uu socon doona tababarkani mudo 5 maal-mood ah.